ရင်ခုန်သံ သွေးလှူအသင်း | Myanmar Blog
လောကတွင် ရင်ခုန်သံကင်းမဲ့နေသောသူသည် ရှင်သန်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ
သြဂုတ် (၁) ရက်နေ့ စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပမည်။
ရင်ခုန်သံသွေးလှူရှင်အသင်းရဲ့ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ဒါနဥပပါရမီ စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပမည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် (၁) ရက် စနေနေ့ နံနက် (၉း၀၀) မှ (၁၂း၀၀) နာရီထိ ရင်ခုန်သံသွေးလှူရှင်အသင်းရဲ့ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ဒါနဥပပါရမီ စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲကို မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ် ၊ အခန်း (၂၀၅) ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အတိုင်းမသိ မွန်မြတ်သော အလှူဒါနတစ်ခု အတူအကွ ပြုကြရအောင် စေတနာသွေးလှူရှင်များနှင့် ဒါနအလှူရှင်တို့ကို အသိပေးနှိုးဆော် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။စေတနာသွေးလှူရှင်များအနေဖြင့် - မလှူခင်တစ်ညမှာ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ခဲ့ပါ။
ဒါနအလှူရှင်များအနေဖြင့် -လက်ဆောင်ပစ္စည်း ၊ အာဟာရဒါနကဲ့သို့သော မိမိတို့ လှူဒါန်းလိုသည့်များကို အသင်းနှင့် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း
အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ. မည်သည့်သွေး အမျိုးအစားမှမဆို RH Negative (-) ဖြစ်နေပါက အသိပေးပါ။ ထိုသူများကို အသည်းရောင် (ဘီပိုး) ကာကွယ်ဆေး (အခမဲ့) ထိုးနှံပေးနေပါတယ်။ပက်ထရစ် ၊ ရင်ခုန်သံသွေးလှူရှင်အသင်း (ဖုန်း ၀၁ ၇၂၁ ၅၇၈ )တွင် စုံစမ်းနိုင်ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၊ အမျိုးသားသွေးဌာန (ဖုန်း ၀၁ ၂၅၆ ၁၁၂ လိုင်းခွဲ ၈၆၈/၈၆၉ )သို့ တိုက်ရိုက်သွားရောက် ထိုးနှံနိုင်ကြပါသည်။
~ by Ko Ko Ye` on July 27, 2009.
Posted in ရန်ကုန်, Local, Share
Tags: ရင်ခုန်သံ, သွေးလှူ, Give Blood Save Life, Yin Khone Than
Learning Ebook Download